Fandefasana any amin'i or from Basel & Zurich Airport | Ny asa fanompoana any Soisa
Fandefasana an'i Basel Fanompoam-pivavahana, ny seranan-tsambo any amin'ny seranan'i Basel sy Zurich. Ny Soisa.
Ny vidin-tsolika azo antoka, antsoy anay tsy misy adidy na ampiasao fotsiny ny fampifandraisana izahay eto ambany.
Mividiana ankehitriny ary mandoa ny saran-dalana.
(Ho valin'ny 1 ora izahay.)
Mitady transfusion amin'ny seranana any Basel na any Zurich ve ianao? Dia miandrandra ny hihaino anao.
Mampifandray ny fampiononana amin'ny serivisy taxi azo antoka isika miaraka amin'ny fahatsapana tsara amin'ny serivisy seranan-tsambo amin'ny serivisy tinay.
Faly izahay mitondra anao amin'ny entana an-tserasera mankany amin'ny seranan'i Basel na any amin'ny toerana hafa any Soisa. Azafady mba hampahafantatra anay amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny fanirianao manokana.
ohatra Basel City Airport Basel Chf 40.-
Fandefasana seranam-piaramanidina avo lenta sy sarobidy ho an'ny Basel sy Zurich
Ny serivisy fampitaovana ny seranam-piaramanidina mankany Airport Basel dia mitondra anareo haingana sy azo antoka ho an'ny fiaramanidina na ho any an-tanàna. Indrindra fa any amin'ny seranam-piaramanidina dia matetika no mihozongozona ary mandeha matetika, ary mahafantatra ny tsy fahitana ny fikarohana fiara amin'ny seranana any amin'ny seranam-piaramanidina. Izahay toy ny orinasa taxi dia manome anao ny vahaolana amin'ny serivisy famindrana an-tsambo mba hahafahan'ireo komity any amin'ny seranam-piaramanidina mora foana sy mora foana.
Fandefasana fiaramanidina amin'ny taxi mankany amin'ny seranam-piaramanidina any ivelany
Ankoatra izany, mitondra antsika any amin'ny faritra hafa any Soisa sy akaikin'i Frantsa sy Alemana ihany koa izahay. Na dia lehibe aza ny seranam-piaramanidina Basel, dia tsy manolotra fifandraisana amin'ny sidina foana izy io. Mety ho sarotra ny manomboka amin'ny seranam-piaramanidina manodidina. Hoentina any amin'ny seranam-piaramanidin'i Zurich na any amin'ny faritra manodidina ianareo, tsy misy olana, ohatra amin'ny Airport Stuttgart na ny Ivontoerana Eoropeana Frankfurt am Main.
Mifandraisa aminay amin'ny fitetezam-paritra tsirairay, na mandeha mivahiny sy miala sasatra any Soisa, na manao dia lavitra any Suisse noho ny raharahambarotra.
Our service taxi
Mipetraka any Basel ianao ary tiany ny serivisy fampitaovana ataonao Airport Basel Boky? Tsy misy olana, mitondra olona 7 ao anaty fiara fitateram-piaramanidina madinidinika izahay, miaraka amin'ny entana any amin'ny seranam-piaramanidina Basel, Zurich, Genève na any ivelany. Manasa anao amim-pahamoram-panahy sy amim-panajana amin'ny seranam-piaramanidina misy anao
Fanompoana ho an'ny mpandeha sy orinasa
Mikarakara tetikasa lehibe ho an'ny orinasa lehibe koa izahay, ny mpiasanao dia ohatra amin'ny hotely any Basel ary mila mifindra any amin'ny tanàna hafa, ohatra Zurich, Na tsy maintsy mandeha matetika ianao ary mivezivezy ny lalana iray isan'andro ao Basel. Izahay dia mpiara-miasa akaiky anareo eo amin'ny fitaterana ho an'ny mpampiasa orinasa any Soisa sy ny famindrana amin'ny seranam-piaramanidina.
Antsoy izahay na mandefa SMS izahay ary mangataha ny vidin'ny faktioranay atolotra anay.
Ny serivisy famindrana shuttle an'i Basel.
Fandrosoana fanompoana eo amin'ny tolotra:
Na olona na olona 1 na olona 7, dia ny vidiny ambany ihany
Mahasoa amin'ny Airport Zurich, Basel, Geneva ary mandehandeha any ivelany
Tsy misy sarany miafina, vidin'ny faktiora
Tsy misy saram-bola amin'ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit
Mpifanaraka sy serivisy mahomby
Antsoy izahay amin'ny isa manaraka: